इन्डियानापोलिस मार्केटिंग र व्यापार पुस्तक क्लब | Martech Zone
इन्डियानापोलिस मार्केटिंग र व्यापार पुस्तक क्लब
सोमबार, अगस्ट 14, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
आज दिउँसो खाजामा मैले केहि साथीहरूसँग कुराकानी गर्न भेटे नग्न कुराकानीहरू। हामीसँग थुप्रै उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको शानदार समूह थियो: कानूनी, सार्वजनिक सम्बन्ध, टेलिभिजन, टेलिकम, इन्टरनेट, ईमेल मार्केटिंग, खेल, मनोरन्जन, सूचना प्रविधि, मार्केटि and र प्रकाशन!
पहिलो प्रदर्शनको लागि खराब छैन!
हामी मध्ये धेरैले पूर्ण रूपमा पढेका थियौं नग्न कुराकानीहरू, केहि यस मार्फत आंशिक रूपमा थिए, र केही वास्तवमै पुस्तकबाट केही सामग्री कार्यान्वयन गरेका थिए। मेरा सहकर्मीहरू स्वतन्त्र हुन चाहान्छन् यदि तिनीहरू चाहानुन् भने चिप इन गर्न सक्दछन्, तर यहाँ लन्चियनको मेरो छाप छ, पुस्तकमा प्रतिक्रिया, साथै सामान्य रूपमा ब्लगि::
ब्लगिंग सबै कम्पनीहरूका लागि नहुन सक्छ। यदि तपाईं पारदर्शी हुनुहुन्न भने, तपाईंले राम्रो भन्दा तपाईंको कम्पनीलाई बढी नोक्सान गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँ संग वा तपाइँ बिना कुराकानी गर्न जाँदैछन्। किन यस कुराकानीको दिशा नियन्त्रण गर्न को लागी यसको बारेमा सबै भन्दा पहिले ब्लग हुनुभए कसो होला? एक सन्देश फोरम तपाइँको ग्राहकहरु लाई सोध्न को लागी प्रतिक्षा गर्दछ। एक ब्लॉग भनेको सोधिनु अघि टिप्पणी गर्ने अवसर हो।
ब्लगिंग नीतिहरु बेकार छन्। जब कर्मचारीहरू ब्लग, एक अनुपयुक्त पोष्ट थप्न यो ईमेलमा, वा फोनमा, वा कुराकानीमा भन्दा कम हानिकारक हुँदैन। कर्मचारीहरू कुनै पनि माध्यम मार्फत उनीहरूले जे जवाफ दिन्छन् जवाफदेही हुन्छन्। यदि तपाईं ब्लगर हुनुहुन्छ भने ... जब शंका हो, सोध्नुहोस्! (उदाहरण: मैले समूहबाट अनुमति मागेन यदि मैले उनीहरूको नाम, कम्पनीहरू, टिप्पणीहरू, आदि सूचीबद्ध गर्न सक्छु त्यसैले म यहाँ जाँदैछु)
संसाधनहरू चिन्ता र कुराकानीको विषय थिए। समय कहाँ छ? रणनीति के हो? सन्देश के हो?
यो ब्लग गर्न को लागी सजिलो छ, तर तपाईले कसरी आफ्नो ब्लग पछाडिको टेक्नोलोजी कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नै पर्छ ... आरएसएस, लिंक, ट्र्याकब्याक, पिंग्स, टिप्पणीहरू, आदि।
यदि ब्लगिaरणनीतिको रूपमा खटाइएको छ भने, लगानीमा के फिर्ता हुन्छ? यो एक स्वस्थ छलफल थियो। मलाई लाग्छ कि सामान्य सहमति यो थियो कि अब यो विकल्प छैन जहाँ लगानीको फिर्ताको मूल्या should्कन गरिनु पर्दछ ... यो एक माग हो र तपाइँको ग्राहकहरुबाट सञ्चारका यी लाइनहरू खोल्न अपेक्षा गर्दछ। अन्यथा, तिनीहरू केवल अरू कतै जान्छन्!
यदि तपाईं इंडियानापोलिस क्षेत्र मा एक व्यापार, मार्केटिंग वा प्रविधि पेशेवर हो र हाम्रो पुस्तक क्लब को लागी हामीसँग सामेल हुन चाहानुहुन्छ भने, केवल यहाँ दर्ता गर्नुहोस् म इन्डी छान्नुहोस्! र किन तपाईं इंडियानापोलिस छान्नुभयो भनेर आफ्नो कथा बुझाउनुहोस्। हामी तपाईंलाई हाम्रो वितरण ईमेलमा अर्को पुस्तकको नाममा राख्नेछौं जुन हामी पढ्न गइरहेका छौं र जब हामी त्यसलाई पछ्याउँदैछौं।
एक पक्ष नोट मा, शेल इजरायल एक यात्रा विदेश मा रद्द थियो र केही परामर्श गर्न को लागी खुला छ। जसरी उसले यो राख्छ, म धितो मोनिजका लागि सल्लाह लिन्छु। इजरायललाई उनको पुस्तकका लागि विशेष धन्यवाद छ र यहाँ र इण्डियानापोलिसमा धेरै मानिसहरु लाई आफैं र हाम्रो ग्राहकहरुका लागि यो अवसरको खोजी गर्न हौसला प्रदान गर्छन्। हामी पुस्तकहरूको लागत भन्दा धेरै owणी छौं!
प्याट कोयललाई हाम्रो पहिलो गेट-टुगेदर आयोजनामा ​​उदारताका साथै हाम्रो क्लबलाई होस्टिंग र उत्कृष्ट खाजा प्रदान गर्नका लागि विशेष धन्यवाद!
पुनश्च: मेरी छोरीलाई पनि धन्यवाद, हामी कक्षा दर्तामा ढिला थियौं। र मेरो रोजगारदातालाई धन्यवाद, जसले मलाई दिउँसोको लागि केही ढिलो काट्यो!
टैग: शेल इजरायल
तपाईको ब्लगलाई अनुकूलित गर्न मेरो १० सल्लाहहरू
प्रभाव र स्वचालनमा ... WordPress मोबाइल संस्करण
अगस्ट,, २०१ 14 2006:२१ अपराह्न
डग, तपाई हाम्रो इज इजरायललाई राम्ररी हेर्नुहुन्छ तपाईलाई सल्लाह माग्दैछ!
दुबै दयालु शब्दहरू र व्यावसायिक प्लगका लागि धन्यबाद, डग। यो एक महान पुस्तक क्लब जस्तो देखिन्छ र यो पुस्तक को धेरै मुख्य बुँदाहरू छलफल र प्रयोग भइरहेको देख्दा ठूलो प्रतिक्रिया छ।